စုံတွဲတိုင်းပြုလုပ်သင့်တဲ့ Ro အဆန်ဆုံး လက်ထပ်ခွင့်တောင်းသင့်တဲ့ နေရာလေးများ – Trend.com.mm
စုံတွဲတိုင်းပြုလုပ်သင့်တဲ့ Ro အဆန်ဆုံး လက်ထပ်ခွင့်တောင်းသင့်တဲ့ နေရာလေးများ
Posted on January 7, 2020 January 8, 2020 by adminK
Marry me! Marry me! RS goals လုပ်နိုင်ဖို့ Ro အဆန်ဆုံး နည်းလမ်းလေးတွေပါနော်။ ကိုယ်ချစ်ရသူကို Romantic အဆန်ဆုံး Proposal နည်းလမ်းနဲ့ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာလေးတွေက သင့်ဆန္ဒကို ဖြည့်စွမ်းပေးပါလိမ့်မယ်။
ချစ်သူနှစ်ယောက် အမြဲဆုံနေကြနေရာဆိုတာ အမှတ်တရတွေနဲ့ အမြဲ အမှတ်ရနေမယ့် နေရာလေးပါ။ ဒီနေရာလေးက ချစ်သူနှစ်ယောက်အတွက် Ro ဆန်မယ့် နေရာလေးဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ဆုံနေကြနေရာလေးမှာ ထင်မှတ်မထားတဲ့ အချိန် သင့် ချစ်သူလေးကို Surprise လုပ်လိုက်ပါ။ အရိုးဆုံးက အဆန်းဆုံး ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့စကားလည်း ရှိတယ်မလား။ သေချာပါတယ်။ သူမ သင့်ကို မငြင်းဆန်နိုင်ပါဘူး။
ဆိုင်ပိုင်ရှင်၊ ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ သေသေချာချာ ကြိုတင် ညှိနှိုင်းထားပါ။ စားသောက်နေရင်း သူမကြိုက်တဲ့ သီချင်းလေးဖွင့်ပေးသလိုမျိုး၊ မျက်လှည့်ပြသလိုမျိုး အံ့အားသင့်စေမယ့် အရာတစ်ခုခု ပြုလုပ်လိုက်ပါ။ သူမ သင့်ကို ခေါင်းညိတ်ပါလိမ့်မယ်။
လတ်ဆတ်တဲ့ ပင်လယ်လေလေးကို ရှူရှိုက်ကာ ချစ်သူနှစ်ယောက် လမ်းလျှောက်နေလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ပြေးလွှားဆော့ကစားရင်း၊ အမှတ်တရလေးတွေ ပြောကာ သဲသောင်ပြင်ပေါ်မှာ Will you marry me? လို့ ရေးလိုက်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်။ သူမက သင့်ကို Yes! ပါတဲ့။
Marry me! Marry me! RS goals လုပျနိုငျဖို့ Ro အဆနျဆုံး နညျးလမျးလေးတှပေါနျော။ ကိုယျခဈြရသူကို Romantic အဆနျဆုံး Proposal နညျးလမျးနဲ့ လကျထပျခှငျ့တောငျးခငျြပါတယျဆိုရငျတော့ ဒီနရောလေးတှကေ သငျ့ဆန်ဒကို ဖွညျ့စှမျးပေးပါလိမျ့မယျ။
ခဈြသူနှဈယောကျ အမွဲဆုံနကွေနရောဆိုတာ အမှတျတရတှနေဲ့ အမွဲ အမှတျရနမေယျ့ နရောလေးပါ။ ဒီနရောလေးက ခဈြသူနှဈယောကျအတှကျ Ro ဆနျမယျ့ နရောလေးဆိုလညျး မမှားပါဘူး။ ဆုံနကွေနရောလေးမှာ ထငျမှတျမထားတဲ့ အခြိနျ သငျ့ ခဈြသူလေးကို Surprise လုပျလိုကျပါ။ အရိုးဆုံးက အဆနျးဆုံး ဖွဈတယျ ဆိုတဲ့စကားလညျး ရှိတယျမလား။ သခြောပါတယျ။ သူမ သငျ့ကို မငွငျးဆနျနိုငျပါဘူး။
ဆိုငျပိုငျရှငျ၊ ဝနျထမျးတှနေဲ့ သသေခြောခြာ ကွိုတငျ ညှိနှိုငျးထားပါ။ စားသောကျနရေငျး သူမကွိုကျတဲ့ သီခငျြးလေးဖှငျ့ပေးသလိုမြိုး၊ မကျြလှညျ့ပွသလိုမြိုး အံ့အားသငျ့စမေယျ့ အရာတဈခုခု ပွုလုပျလိုကျပါ။ သူမ သငျ့ကို ခေါငျးညိတျပါလိမျ့မယျ။
လတျဆတျတဲ့ ပငျလယျလလေေးကို ရှူရှိုကျကာ ခဈြသူနှဈယောကျ လမျးလြှောကျနလေိုကျပါ။ ပွီးရငျ ပွေးလှားဆော့ကစားရငျး၊ အမှတျတရလေးတှေ ပွောကာ သဲသောငျပွငျပျေါမှာ Will you marry me? လို့ ရေးလိုကျပါ။ ဟုတျပါတယျ။ သူမက သငျ့ကို Yes! ပါတဲ့။
၂၀၁၉ ခုနှစ် အကယ်ဒမီအတွက် တစ်ပြေးနေတဲ့ မင်းသမီး ၆ ယောက်
အလှအပရေးရာအဖြာဖြာအတွက် အုန်းဆီရဲ့ အံ့မခန်း အသုံးဝင်မှုများ